Postfix 3.5.0 ကိုဖြန့်ဝေပြီးပါပြီ Linux မှ
တစ်နှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြီး, ပစ်လွှတ် မေးလ်ဆာဗာသစ်တည်ငြိမ်ဌာနခွဲ Postfix, ၃.၅.၀။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၂၀၁၆ အစောပိုင်းတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Postfix 3.1 ဌာနခွဲကိုထောက်ခံကြောင်းအပြီးတွင်ကြေငြာခဲ့သည်။
Postfix နှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောသူများအတွက်၎င်းသည်ဤအရာကိုသိသင့်သည် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲမေးလ်ဆာဗာ, လတ်သော အီးမေးလ်လမ်းကြောင်းနှင့်ပေးပို့ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်ပိုမိုမြန်ဆန်သော၊ စီမံခန့်ခွဲရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသော Sendmail အစား ပို၍ လုံခြုံသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဖန်တီးခဲ့သည်။
Postfix သည်မြင့်မားသောလုံခြုံရေး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ပေါင်းစပ်ပေးသောစီမံကိန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်စွာစဉ်းစားထားသောဗိသုကာနှင့်ကုဒ်ဒီဇိုင်းနှင့် patch စာရင်းစစ်များအတွက်တင်းကြပ်စွာတင်းကြပ်သောမူဝါဒများကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
ဆော့ဖ်ဝဲသည်မြန်ရန်၊ စီမံရန်လွယ်ကူရန်နှင့်လုံခြုံရန်ကြိုးစားသည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လက်ရှိအသုံးပြုသူများကိုအနှောင့်အယှက်မပေးစေရန် sendmail နှင့်သဟဇာတဖြစ်မှု။ ဒါကြောင့်အပြင်ဘက်မှာ sendmail နဲ့ဆင်တူပေမယ့်အတွင်းပိုင်းကလုံးဝကွဲပြားတယ်
Postfix၊ 3.5.0 မှာဘာတွေရှိသလဲ။
ဒီပြissueနာအသစ် သတိပြုရန်မှာ HAProxy 2.0 load balancer protocol အားထောက်ခံမှုထည့်သွင်းထားသည် TCP မှ IPv4 နှင့် IPv6 တို့မှ proxy request များ (သို့) ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုအတည်ပြုသည့် heartbeat validation requests ကို proxy connection မသုံးပဲနှင့်အတူ။
ဒါ့အပြင် ခေတ်မမီတော့သောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိရန်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုအတင်းခေါ်ခိုင်းသည် ပေးပို့သူထံသို့ပြန်ပို့ရန် (မပေးပို့ပါ) ပေးပို့မှုမည်သည့်ကြိုးပမ်းမှုမဆိုပေးပို့သူအားပြန်ပို့ရန်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပို့ဆောင်လိမ့်မည် လူတန်းစား
Postup command တွင် "-e" နှင့် "-f" အလံများကိုထည့်သွင်းခဲ့သည် ခေတ်မမီတော့သောသတင်းတစ်ခု၏ attribute ကိုသတ်မှတ်ရန်။ အလံအကြားခြားနားချက် "-F" သည်မက်ဆေ့ခ်ျအားချက်ချင်းပြန်ပို့ပေးသောအရာဖြစ်သည် ဒါကြောင့်မကျေနပ်မှုခံရဖို့တန်းစီ၌တည်ရှိ၏။ mailq နှင့် postqueue အမိန့်များ၏ရလဒ်တွင်ဟောင်းနွမ်းသောမက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖိုင်အမည်ပြီးနောက်“ #” ဖြင့်မှတ်သားသည်။
ဖောက်သည်များအပေါ် SMTP နှင့် LMTP တို့ကိုမျိုးစုံသောအိမ်ရှင်များစာရင်းပြုစုရန်အတွက်ထပ်ထည့်ထားသည် အခြားဆာဗာသို့မက်ဆေ့ခ်ျများ redirect ရန်။ ၎င်းသည်ဖော်ပြထားသော host များအားမက်ဆေ့ခ်ျကိုသတင်းပို့ရန်ပထမအကြိမ်မရရှိနိုင်ပါကဒုတိယအချက်အားပေးပို့ရန်ကြိုးပမ်းလိမ့်မည်။ အဆိုပါစာရင်းညွှန်ကြားချက်များအတွက်အကောင်အထည်ဖော်နေသည် relayhost၊ transport_maps, default_transport နှင့် sender_dependent_default_transport_maps.
နောက်ထပ်အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည် သစ်ထုတ်လုပ်ရေးအပြုအမူပြောင်းလဲသွားတယ်။ "from =" နှင့် "to =" ရှိလိပ်စာများကိုကိုးကားချက်များဖြင့်သိမ်းဆည်းထားသည်။ လိပ်စာ၏ဒေသဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအာကာသသို့မဟုတ်အထူးဇာတ်ကောင်ပါလျှင်, လိပ်စာ၏သတ်မှတ်ထားသောအစိတ်အပိုင်း ၎င်းသည်စံချိန်တင်အကိုးအကားများဖြင့်ပူးတွဲပါလိမ့်မည်။
ယခင်အပြုအမူကိုပြင်ဆင်မှုသို့ပြန်ပို့ရန်၊info_log_address_format = ပြည်တွင်းရေး"။
မတိုင်မှီ = မှ
ယခု: = <"name with spaces" @ example.com> မှ
ခေါင်းစီးများမှရရှိသော IP လိပ်စာများ XCLIENT y XFORWARD သို့မဟုတ် HaProxy protocol မှတဆင့်စံသတ်မှတ်ထားသည်။ အပြောင်းအလဲသည် IPv6 subnet မြေပုံကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်မူဝါဒအတွင်းစံချိန်ကိုက်ညီမှုကိုချိုးဖောက်နိုင်သည် check_client_access.
Dovecot, ခေါင်းစီးများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရန် ပေးပို့ - X ကို - မူရင်း -to y အပြန်လမ်း ပေးပို့အေးဂျင့်မှပူးတွဲထားသည် SMTP + LMTP သုံးပြီး အလံ = DORX အလံများ master.cf ၌, ဒေသခံနှင့်ပိုက်လိုင်းပေးပို့အေးဂျင့်မှဆင်တူသည်။
ဇယားတွင်သတ်မှတ်ထားသောလက်မှတ်များကိုအတည်ပြုရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသတ်မှတ်သည် check_ccert_access။ ပထမ ဦး စွာသုံးစွဲသူ၏လက်မှတ်၏ nugget ကိုစစ်ဆေးပြီး client ၏ public key (အပြုအမူသည်«search_order = cert_fingerprint၊ pubkey_fingerprint«) ။
Finalmente သင်ကအကြောင်းပိုမိုသိလိုလျှင် ဒီဗားရှင်းအသစ်ထုတ်လွှတ်ခြင်းအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုသင်စစ်ဆေးနိုင်ပြီး၊ မူကွဲအသစ်တပ်ဆင်ရန်အတွက်အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုရယူနိုင်ပါတယ် အောက်ပါ link ကိုမှာ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Postfix 3.5.0 ကိုလွှတ်ပြီးပါပြီ